Waa maxay flexography? Taariikhda, qeexida iyo sifooyinka aasaasiga ah | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waa maxay flexography?
Farshaxanka garaafyada ayaa si aad ah loogu soo bandhigay adduunka naqshadaynta garaafyada. Si aad u badan daabacaaddu waxay noqotay qayb ka mid ah 50% wadarta guud qaybo ka mid ah mashruuca naqshadeynta.
Maqaalkan, waxaan ku sharxeynaa waxa uu yahay flexography, nooca daabacaadda oo si ballaaran loo isticmaalo naqshad kasta oo baakad ah oo aan ahayn taas oo keliya, laakiin sidoo kale waa qayb ka mid ah qaybta xayaysiinta iyo suuq-geynta. Habka loola xidhiidho shirkadeena oo aan u maareeyo si ka sii daran oo xirfad leh.
Halkan waxaan ku qeexnaa ereyga jilicsanaan waxaanan sharxeynaa sifooyinka ay leedahay.
2 wax yar oo taariikhi ah
3 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
5 Shirkadaha Flexography
Ereyga flexography ama sidoo kale loo yaqaan daabacaadda flexographic, waa mid ka mid ah kuwa badan hababka iyo noocyada daabacaadda ee ka jira adduunka daabacaadda. Maxaa lagu gartaa habkan si fiican loo yaqaan waa in ay adeegsadaan isticmaalka taarikada qaabka gargaarka halkaasoo lagu daabaco substrates kala duwan oo kiiskan aan ognahay sida filimada polyester, naylon, metallic, warqad, kartoonada ama dunta, kuwaas oo aan ahayn dhar.
Habkan daabacaaddu waxa ay ka dhacday horraantii 20-aadkii gudaha dalka Maraykanka balse laga leeyahay Faransiiska. Laga bilaabo daqiiqada ugu horeysa daabacaadda aniline oo dib loo magacaabay halkaas oo aad looga sii caan baxay khadkii ama midabada yaryar ee wakhtigaas la isticmaali jiray. Tobannaan sano iyo sano ka dib, waxaa loo beddelay sida aan maanta u naqaanno, flexography.
wax yar oo taariikhi ah
Sannadkii 1890-kii Bibby Baron ayaa naqshadeeyay mishiinkii ugu horreeyay Kaas oo ka koobnaa daabicista cawska ee dhululubo midab leh oo ku yaala hareeraha durbaanka si loo daabaco boorsooyinka waraaqaha. Xaqiiqdu waxay tahay in ikhtiraacii sidaas oo kale aanu ahayn mid guulaysta, laakiin runtii waxaa loo arkaa asalkii ugu horreeyay ee mashiinnada daabacaadda flexography sida aynu maanta u fahamno.
Dhowr sano ka dib, 1905kii, mishiinkii ugu horreeyay ee flexographic ayaa la ansixiyay loogu talagalay daabacaadda boorsooyinka waraaqaha, kuwaas oo loo isticmaalo saliidaha aniline ee lagu qasi jiray khamriga sida midabada. Labaatan sano ka dib, habkan ayaa hore loogu yaqaanay Jarmalka sida daabacaadda caagga ah.
Flexography loo isticmaalo habka daabacaadda Waxaa la allifay Faransiiska 1905tii by Houleg. Waa nidaam daabacaad gargaar oo sarreeya, kaas oo meelaha qaar ka mid ah saxanaddu ay ka sarreeyaan kuwa kale waana kuwa ka tagaya ra'yigooda warqadda.
Nidaamku dhab ahaantii waa la mid kan loo isticmaalo teebabka, kala duwanaanshiyaha ayaa ku jira taarikada la isticmaalo. Halka qoraalka qoraalka saxanku uu noqon karo mid aad u adag, walxaha loo isticmaalo flexography, sida magaceeda ka muuqata, waa dabacsanaan iyo caag. Runtii, bilawgii hawsha waa la ogaa magaca daabacaadda xanjo.
Waa kan Habka ugu badan ee loo isticmaalo shaabadeynta weelasha iyo baakadaha. Sannadihii 50-aadkii, farsamadu waxay soo saartay daabacaadda khamriga iyo khadadka biyaha ku salaysan halkii la isticmaali lahaa kuwa aniline-dhaqameedka ah, kuwaas oo aad uga badan sunta. Kadibna isticmaalka taarikada ku salaysan sawir-qaadayaasha Halkii kuwa caagga ah, waxay ka dhigan tahay kacaan xagga farsamada ah.
Dhinaca daabacaada, saddex dhismo ayaa diyaar ah taas oo ka duwan midba midka kale iyo in mid kastaa la qabsado mashiinka flexo.
Kuwa ugu muhiimsan waa: Mashiinnada daabacaadda durbaanka flexo ee dhexe, mashiinnada flexo-iska-buuxa ah iyo mashiinnada flexo ee khadka.
Mashiinadan waxay ka kooban yihiin: rullaluistemadka anilox oo sahlaysa daabacaadda saxda ah, nidaamka daab takhtarka oo leh qol khad oo keenaya cadadka midabka lagama maarmaanka ah ee ku jira rullaluistuyada, saxan dhululubo ah oo saxanadda daabacadu ku rakiban tahay, dhululubada daabacaadda Substrate-ku wuxuu ku nasanayaa marka saxanka daabacadu uu riixayo, iyo habka qalin-jabinta.
Nidaamku waa mid aad u fudud maadaama inta lagu jiro habka daabacaadda qalinka lagu shubo iyada oo loo marayo gudaha qolka khad habka daabka dhakhtarka ee aan kor ku soo sheegnay. Gudaha qolka la sheegay, waxaanu ka helnaa laba baaluq oo soo qaada khad inta ay la xiriirto rullaluistemadka anilox.
rullaluistu waxay dhaqaaqdaa oo wareegtaa si ay dusha sare ula soo gaadho gargaarka taarikada daabacaadda ee ku dul yaal dhululubada, sidaas awgeed waxay u wareejinaysaa khadkii ay soo ururiyeen daabyada dhakhtarku.
Faa'iidooyinka nidaamkan daabacaaddu waxay aad muhiim ugu yihiin warbaahinta nuugaya ama waraaqaha ku tartamaya suuqa kala iibsiga.
Mashiinada waa qiimo jaban, taasi waa, mishiinadani waa kuwo raqiis ah haddii aan barbar dhigno daabacaadda offset iyo bollow, iyo natiijooyin la mid ah ayaa laga helaa mashaariicda qaarkood ee la fuliyo.
Ma wasakhayso ama kama tago dhabarka wax calaamad ah maadaama ay jirto mishiin si cadaalad ah u jajaban in kasta oo ay gargaar sare.
Taarikodu sidoo kale waa kuwo raqiis ah oo aan qaali ahayn, taasoo la micno ah in alaabadu ay jaban tahay oo ay waxtar u yihiin shaqooyinka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Si kastaba ha ahaatee, weli aad bay uga qaalisan yihiin taarikada.
Waxay ka kooban yihiin xawaarahooda daabacaadeed oo weyn, taas oo ka dhigaysa habka xitaa dhakhso badan oo sahlan.
Waxaa jira joogteynta go'aaminta midabka, taas oo ah, nidaamka qalin-jabinta ayaa u oggolaanaya xakamaynta midabka in la ilaaliyo inta lagu jiro daabacaadda, taas oo dammaanad qaadaysa daacadnimada taranka.
Kala duwanaanshiyaha awood u leh in lagu daabaco taageerooyinka nuugaya iyo kuwa aan nuugi karin, marka lagu daro awooda isticmaalka qaababka kala duwan, waxay u ogolaaneysaa khadka wax soo saarka ku habboon noocyo badan oo suuqyo ah.
Waxaa jira cillado aad u yar oo ka jira flexography, qaar badan oo ka mid ah waa:
Waxay dhalisaa saamaynta squash taas oo wax u dhimaysa is-qabashada iyo is-waafajinta midabka.
Xukunnada hooseeya sababtoo ah nooca saxanka loo isticmaalo, waxay la macno tahay in tayada sawirku aanu ku filnayn.
Waxaa jira qallafsanaan maadaama habka afar-midabku u janjeero inuu yeesho xaddidaadyo gaar ah.
Codsiyada ugu caansan ee daabacaadda noocan oo kale ah ayaa badanaa lagu arkaa dhammaan ka sarreeya dhammaan cuntooyinka kala duwan, taas oo ah, mid kasta oo ka mid ah wax soo saarka duubayaasha. Taasi waa sababta, sida aan horay u soo sheegnay, qaybta baakadaha. Tani waa sababta aan caadi ahaan u helno:
Duubista iyo baakaynta
Cellophane ama caag
Qalab aad u adag sida tetrabriks
Weelka caanaha iyo cabitaanka
sanduuqyada isku laabma
Bacaha waraaqaha iyo bacaha
sanduuqyada waraaqaha adag
Xirmooyinka gaarka ah sida muraayadaha iyo weelasha iyo calaamadaha iyo sumadaha.
diflex waa shirkad la aasaasay 1995 waxayna xarunteedu tahay Madrid (Spain), waa shirkad guulaysata, taas oo muddo kooban ay shirkaddu ku kasbatay sumcad tayo, joogtayn, waqtiyo gaabni ah, adeeg heersare ah iyo hal-abuur joogto ah.
Waa shirkad leh aragti hufan iyo xirfad hoggaamineed oo guusheeda ku salaysan khibradda shaqaalaheeda, taas oo aan dan ka lahayn in ay maalgeliso goobaha shaqo ee ugu wanaagsan iyo kaabayaasha ugu casrisan.
Esko waxay soo bandhigtay HD Flexo adduunka daabacaadda flexo, tan iyo markaas shirkaduhu waxay ka guurayeen wax soo saarka gravure. Faa'iidooyinka ayaa aad u wanaagsan in la iska indho tiro: markii ugu horeysay flexo daabacaadda xafiiltamayaasha tayada xarafka iyo daabacaadda warqadaha.
Waa goobta farsamada ee caadiga ah ee shirkadaha flexography ee qaranka iyo dhammaan silsiladda qiimaha, oo bixisa dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah ee u oggolaanaya daabacayaasha si ay u fuliyaan ama u wanaajiyaan shaqadooda meelo iyo qaybo kala duwan.
Bixinta macluumaadka iyo aqoonta iyada oo loo marayo shirarka farsamada ee sannadlaha ah, tababarka, maqaallada farsamada, shirarka joogtada ah, wargeysyada bilaha ah iyo ka tirsanaanshaha FTA Europe, Ururka Farsamada Flexographic, kaas oo u taagan danaha guud ee warshadaha daabacaadda flexographic ee Yurub.
Fina waxay asal ahaan ka timid ganacsiga qoyska Rotogravure Fina, oo la aasaasay 1974, oo ku takhasusay daabacaadda warbaahinta dabacsan ee xirmooyinka macaamiisha. maanta waa fiican yahay, waxay bixisaa xalal horumarsan oo la habeeyey, in gravure iyo flexography, si ay ugu horreeyaan shirkadaha cuntada iyo qaybaha kale.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay joogitaan caalami ah oo muhiim ah, iyada oo loo dhoofiyo Jarmalka, Faransiiska, Portugal iyo Boqortooyada Ingiriiska. Hal-abuurnimada, tignoolajiyada casriga ah iyo habka ugu wanagsan, oo leh ixtiraamka ugu sarreeya ee deegaanka, ayaa fure u ah falsafada Fina.
Haddii aad gaartay dhamaadka boostada, waxaan ku dari karnaa oo kaliya inaan rajeyneyno inaad wax badan ka baratay farsamadan daabacaadda ee la isticmaalayey dhowr sano oo taariikh leh.
Shirkado badan oo badan ayaa ku sharmaaya flexography sida habka ugu muhiimsan ee wax soo saarka, maadaama ay tahay hawl aad looga baahan yahay dalal kala duwan. Intaa waxaa dheer, qaar badan oo ka mid ah alaabooyinka aan soo iibsanno iyo kuwa aan isticmaalno maalinteena maalinlaha ah, mid kasta oo ka mid ah baakaddooda ama duubkooda, hannaan qallafsan oo kala duwan ayaa la sameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay flexography?
Isotypes: waxa ay yihiin iyo tusaalooyin
Sida loo isticmaalo Photoshop